Manohana An’i Okraina Ireo Rosiana Lehiben’ny Mpanohitra, Fa Tsy Hiverina Kosa Anefa i Krimea · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Oktobra 2014 8:54 GMT
Mamoaka ny heviny mikasika an'i Krimea ireo filohan'ny mpanohitra Khodorkovsky sy i Navalny. Sary natambatr'i Tetyana Lokot.
Manana hafatra ho an'ny Okrainiana ireo olona fanta-daza mpitarika ny fanoherana ao Rosia: Lasa i Krimea, ary tsy ho voaverin'i Okraina intsony izy.
Ankehitriny tazonina any amin'ny toerana tsara ambina, noho ny fiampangana mampiahiahy ho nanaovany fanodikodinam-bola i Alexey Navalny, ilay mpitsikera fatratra an'i Poutine ary mpisolovava miady amin'ny kolikoly namoaka ny heviny mikasika an'i Krimea, ny ady any Okraina, ary ireo tranga hafa Rosiana, taminà tafatafa nahatonga resabe ny 15 Oktobra niaraka tamin'i Alexey Venediktov, tonian'ny famoahana ao amin'ny Ekho Moskvy (Akon'i Moscow). Na teo aza ny tsikerany amin'ny fiahian'i Rosia ny ady any Okraina, toa tampoka ho an'ny maro ny fanehoan-kevitra momba an'i Krimea nataon'i Navalny.
Mieritreritra aho, fa na dia tratra taminà fanitsakitsahana mibaribary ireo fenitra maneran-tany tokony arahana aza i Krimea, ny zava-misy tsy azo lavina dia anisan'ny Federasiôna Rosiana i Krimea ankehitriny. Tsy tokony hifamitaka isika. Ary manipy hevitra ireo Okraniana tsy hifamitaka ihany koa aho. Efa lasa anisan'i Rosia io ary tsy ho tonga anisan'i Okraina intsony aloha ato ho ato.
Nanontan’ i Venediktov an'i Navalny ny zavatra mety nataony raha izy no filohan'i Rosia : hamerina an'i Krimea ho an'i Okraina ve izy, sa hitazona ilay fanampiny vaovao ao amin'i Rosia? Niezaka niala amin'ny ampahany tamin'ilay fanontaniana i Navalny, nanontany hoe bolongan-kena angaha i Krimea “ka azonao atolotra dia alaina avy eo,” saingy namaly ihany izy nony farany fa hitany ho zavatra tsara ho an'i Okraina ny namoizany an'i Krimea.
Mieritreritra aho, fa tombony ho an'i Okraina izany, raha amin'ny zava-misy, na dia eo aza ny alahelo sy ny zavatra hafa tsapany. Hafaliana lehibe ny nialàn'i Krimea tamin'i Okraina, amin'ny fiandaniany tanteraka amin'ny faritra Rosiana ary ny vahoakany mitazona hatrany ny fomba fanaony, izay tsy hanana anjara amin'ny fitakiany fanovàna, ny ady amin'ny kolikoly izay ataony, ary ny tsy fananany finiavana ny hanjohy an'i Eorôpa mihitsy. Very mpifidy 2 tapitrisa mety nanohintohina io hetsika ataony io izy ireo. Tranga nahazoana tombony izany io amin'ny lafiny iray. Amin'ny lafiny Politika, fanelingelenana ho an'ny ankolafy roa, Okraina sy Eorôpa mandritry ny fotoana maharitra io.
Tsy olona tonga lafatra i Navalny hatrizay, ho an'ny fanoherany malalaka tao Rosia, amin'ny fanompoan-tanindrazany tsy misy fihafahafana, ary ny kabary tsara lahatra tsy mankasitraka ny hifindran'ireo vahiny any amin'ny taniny. Kanefa, tafahoatra loatra ho an'ireo Rosiana liberaly sy Okraniana maro, ny fanekeny ny nakàn'i Poutine an'i Krimea.
Крим – це Україна! #НавальныйПНХ pic.twitter.com/2iqGzxvUIN
Okraina i Krimea! #FU Navalny
Saika tsy tafita tamin'ny olona ny tafatafa tamin'ny radio Ekho Moskvy niarahana tamin'i Navalny: naharay antso an-tariby avy tamin'ny Talen'ny Gazprom-Media, Mikhail Lesin, mantsy i Venediktov, tonian'ny famoahana; izay nangataka ny tsy andefasana ilay tafatafa amin'ny radio, ary norahonana “hahita olana” ny radio-ny (an'ny Gazprom-Media mantsy ny Ekho Moskvy—GV). Toa tsy nandaitra anefa io andrana mibaribary ho fanivanana io, satria tsy noraharahian'i Venediktov ireo fandrahonana, ary nandefa ny tafatafa niaraka tamin'i Navalny ihany izy na ahoana na ahoana.
Taorian'ilay olana be nisy nanodidina ilay tafatafa niaraka tamin'i Navalny, olona iray hafa fanta-daza ao amin'ny mpanohitra indray no nivoaka avy any, nilaza ny tsy fankasitrahany ny hamerenana an'i Krimea ho an'i Okraina: i Mikhail Khodorkovsky, tompon'ny harena sy fahefana teo aloha ary fahavalo be an'i Poutine, izay nandany valo taona tany amin'ny asa an-terivozona, talohan'ny nahazoany famindram-po ny volana Desambra 2013. Nilaza tamin'ny Twitter i Khodorkovsky fa namaky ny tafatafan'i Navalny izy, ary miray hevitra aminy amin'ny ankapobeny amin'ny resaka Krimea:
Namaky ny tafatafan'i Alexey [Venediktov] niaraka tamin'i Alexey [Navalny] aho. Mpiray hevitra izahay amin'ireo tena zava-dehibe . Afaka mifanaraka amin'ny pitsopitsony izahay..
@psykrab отвечаю прямо: я – нет. Проблема Крыма на десятилетия. Путь через размывание границ в Европе, через муниципализацию. Я не доживу.
@psykrab: Tsy ho afa-miala amin'ilay fanontaniana ianao. Haverinao ve i Krimea raha lasa filoha ianao?
Khodorkovsky: Homeko valiny mazava ianao: Tsy hamerina aho. Hitohy mandritra ny am-polo taonany ny olan'i Krimea. Mandalo amin'ny fanakorontanana ny sisintany any Eorôpa ny làlana, amin'ny alàlan'ny fametrahana ny fizaram-paritra. Tsy haharitra ho velona ela eto aho mba hahita izany.
Nanoratra lahatsoratra tamin'ny Facebook ilay mpanao gazety malaza Okraniana, Vitaly Portnikov, nitsikera an'i Navalny sy i Khodorkovsky, izay nahatonga fanehoan-kevitra mihoatra ny an'arivony:
Ary tsy hahita ny tian'i Khodorkovsky sy i Navalny velively isika, na amin'ny firenentsika aza. Tsara kokoa raha misolo tena ny demôkraty eny amin'ireo “Làlana Rosiana” izy ireo, any amin'ireo toeram-pisakafoana Soisa, ary na dia eny amin'i Kremlin aza, izay tsy ahitàna azy hiavaka amin'ireo mpiray tsikombakomba amin'i Vladimir Poutine ankehitriny.
Namaly manokana ny hafatr'i Portnikov i Khodorkovsky, ary ho an'ireo Okraniana an-jatony mpampiasa ny Aterineto, izay nandefa fanehoan-kevitra tezitra mafy, nanazava ny heviny mikasika ny tena zava-misy ara-politika marina any Krimea.
Olona mpanao jadona ihany no afaka hamerina an'i Krimea amin'i Okraina ato anatin'ny folo taona manaraka.
Tsy hiasa mihitsy ny lalàna iray raha tsy misy fahefàna, ary raha mampiasa fahefana ny filoha iray mba hanerena ny fiarahamonina iray, hanao zavatra izay tena tsy hankasitrahan'io fiarahamonina io mihitsy, mpanao jadona izy amin'izay.
Niha-nitombo hasosorana ireo Rosiana mpanohitra ny ao Kremlin, ary raha amin'ny ambaratonga ambonimbony kokoa, ireo Okraniana, tamin'ny hevitr'i Navalny sy Khodorkovsky momba an'i Krimea, nanao azy ireo ho mpamadika sy “vatniks” (fomba fiantsoana ireo Rosiana tia tanindrazana be loatra). Na izany aza, araka ny hita amin'io zavatra mitranga io, fa mbola lavitra ny fitoviam-pijery ireo mpanohitra tsy mankasitraka an'i Kremlin ankehitriny. Raha manohitra ny herisetra Rosiana any Okraina i Navalny, mino ihany koa anefa izy fa “mbola zava-dehibe an-jatony lavitra mihoatra ny Okraina” ny olan'ny fifindramonina tsy ara-dalàna any Rosia.
Khodorkovsky indray nilaza fa mahita ny tenany ho lehiben'ny hetsiky ny Rosiana mpanohitra izy, fa niha-maivana tanteraka io hetsika io hatry ny nahatratrarany ny faratampony, ny taona 2011-13, rehefa nanao hetsi-panoherana nitambatra ireo mpanompo tanindrazana, ireo liberaly, ireo kaominista, ary ireo mpianatra, nanohitra ny kolikoly sy ny hala-bato tamin'ny fifidianana. Miaraka amin'ny fankatoavana an'i Poutine izay mananontanona ny 80% taorian'ny fanambàrana nalaza be an'i Krimea , toa tsapan'reo Rosiana mpanohitra fa tsy hanome vahana azy mihitsy ny manao hetsika manohitra ny loharano tokana lehibe miteraka ny reharehan'ny firenena Rosiana ankehitriny.